उत्पादन « Clickmandu
काठमाडौं । रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले ‘शिलान्यास रिद्धि सिद्धिसँग’ नामक योजना ल्याएको छ । योजना अन्तर्गत ग्राहकले कम्पनीसँग सम्पर्क गरी आफ्नो घर निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्टको निःशुल्क परीक्षण गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौं । मनाङको स्याउ अहिले विश्व बजारमा पुग्न थालेको छ । ‘गरे के हुँदैन भन्ने उखान’ जस्तै एउटा मानिसको सपनाले जिल्ला र राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छ । यस्तै ज्वलन्त
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्सले कोरोनाको विषम परिस्थितीमा ग्राहकहरुलाई सिमेन्ट बिक्री गर्नका लागि ‘शिवम् मोवाईल एप’ सार्वजनिक गरेको छ । जस अन्र्तगत ग्राहकहरुले गुगल प्ले स्टोर तथा आईओएस एप स्टोरबाट शिवम
काठमाडौं । बतास अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको बतास एडब्राइट प्रा।लि। तथा भाटभटेनी सुपर मार्केटबीच नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात २०७७ श्रावणदेखि व्यावसायिक रुपमा ब्राण्डिङ गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार भाटभटेनी सुपर
किशोर प्रधानको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा, शेखरको कार्यकाल सफल बनाउन मैले जित्नुपर्छ
बिराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने जिल्ला नगरका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले घोषणा गरेका छन् । बिराटनगरबाट प्रधानले बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तीनजना पूर्व अध्यक्ष र चैतदेखि
हुन्डाई भेन्यु डिजिटल अभियानका विजेता घोषित, को बने विजेता ?
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई अटोमोवाइलको एक मात्र आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आयोजना गरेको हुन्डाई भेन्यु डिजिटिल अभियानको भाग्यशाली विजेताहरुको नाम घोषणा गरेको छ । हुन्डाई भेन्युको प्रवद्र्धनको लागि आयोजना
एलजीको रोड शो नेपाल अधिराज्यभर शुरु
काठमाडौं । एलजीले नेपाल अधिराज्यभरी रोड शो सुरु गरेको छ । रोड शोमा एलजीले इनोभेटिभ उत्पादनहरुको डिस्प्लेका साथै डेमो पनि गर्नेछ । यस रोड शोको मूख्य आकर्षणमा वासिङ्ग मेसिन, टि.भी.
रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न ३६ विधामा रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट १०औं एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड वितरण गरेको छ । कार्यक्रमको आयोजनामा जगदम्बा स्टील तथा केस कन्स्ट्रक्शनको पनि महत्वपूर्ण सहयोग
सिजीले ल्यायो एलजीको एयर प्युरिफायर
काठमाडौं । सि.जीे इलक्ट्रोनिक्सले एलजी पुरीकेयर एयर प्युरिफायर नेपाली बजारमा भित्राएको छ । यो प्युरिफायरले शक्तिसाली फिल्टरेशन गर्दछ जसले हावामा हानिकारक पदार्थहरु कम गर्दछ र अभिनव शुद्धिकरणहरुले हावामा तैरिरहेको भाइरस
बजार सुस्ताए पनि आक्रमक बन्यो मेगा सिमेन्टः ५ गुणा क्षमता विस्तार गर्न ६० करोड लगानी थप्ने
काठमाडौं । सिमेन्ट कम्पनीहरुको कन्तबिजोग भइरहेका बेला झापामा रहेको मेगा सिमेन्टले भने ५ गुणाले उत्पादन क्षमता बढाउने भएको छ । क्षमता बढाउनका लागि कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्न
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको
नेदरल्याण्डबाट ल्याएका मेसिनले पुराना नोटबाट ब्रिक्रेट बनाइँदै, नोटको आगो ताप्न पाइने
काठमाडौं । हामीले प्रयोग गर्ने नोट पुरानो, भुक्रो, मैलो तथा च्यातिएमा बैंकले साटेर नयाँ अथवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै नागरिकलाई खोप